Semalt: Daty Scraping Web. HTML Mpangalatra sy tombontsoa omen'ny orinasa
HTML vintana dia fitaovana iray izay mamafa ny habaka HTML amin'ny Internet. Fantatsika fa ny ankamaroan'ny tranokala lehibe dia nosoratana tamin'ny HTML. Midika izany fa ny pejy tsirairay azontsika jerena dia ny antontan-taratasy voaomana. Amin'ny fampiasana grafable HTML, azontsika ny mahazo angona avy amin'ny tranonkala isan-karazany ary manova azy ho toy ny format malalaka sy azo henoina toy ny CSV sy JSON - equipment inspections and appraisals. Tsara ny manamarika fa ny varo-kazo HTML dia iray amin'ireo tena mahafa-po indrindra sy mahagaga ravina ary fitaovana fanangonana data ao anaty harato. Ny tombontsoa fototra no resahina etsy ambany.
1. Mamonjy ny fotoanantsika
Miaraka amin'ny grate HTML, dia afaka mamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala dynamique mora foana ianao. Tsy mila fitaovana hafa hiatrehana pejy HTML ianareo satria ity dia programa iray manontolo ao anatin'ny iray mba handraisana ireo angona azo amonoana sy manan-danja ho anao. Tsy toy ny fampiasana rindrambaiko tsotra ny fampiasana tarehimarika maimaim-poana, tsy hanam-potoana firy ny HTML scraper. Ho solon'izany dia hamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala maoderina sy avoaka ao anatin'ny segondra vitsy monja. Mifanohitra amin'izany, ny serivisy hafa dia afaka mijanona fito ka hatramin'ny folo andro ary mandany fotoana betsaka sy hery.
2. Ny haingo sy ny fiarovana
Ny fampiasana ny rindrambaiko amin'ny tranonkala dia malaky kokoa noho ireo antso API, ary ny sasany dia tsy manome fiarovana amin'ny Internet. Mifanaraka amin'ireo tolotra fanangonana tahirin-kevitra, ny vitaminina HTML dia manatanteraka ny asany amin'ny haavo haingana ary afaka manova tarehin'ny tranokala 10 000 anatin'ny 20 - 30 minitra. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia miantoka ny fiarovana sy ny fiainanao manokana. Midika izany fa tsy mila miahiahy momba ny fiarovana ny angon-drakitrao ianao satria tsy hizara amin'ny mpiserasera hafa.
3. Ny fikojakojana tsara sy ny marina
Ny endriky ny HTML dia iray amin'ireo fitaovana fandinganana angona izay manome antoka ny fikolokoloana sy ny marina. Midika izany fa ny angon-drakitra dia tsy misy fahadisoana ary tsy ahitana teny mamitaka. Soa ihany fa tsy mila fikojakojana ny teknolojia ary manatsara ny vokatra tsara.
4. Manampy anao hitoetra ho matihanina
Ao anatin'ity izao tontolo izao mandroso ity dia tokony ho mailo isika satria ny vaovao atolotra ao anaty aterineto dia miova hatrany isaky ny segondra. Raha tiantsika ny hahazo angona marina, dia mila mampiasa volo HTML isika. Raha ny marina, ity fitaovana ity dia afaka manampy ny fanombohana dia dingana iray alohan'ny mpifaninana aminy. Amin'ny grafitrasa HTML, afaka manangona, mandamina, manaparitaka ary manondrana fanazavana avo lenta ianao ao anatin'ny minitra vitsy. Plus, ity tolotra fanararaotana ity dia manampy antsika hitazona ny fironana eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao ary manome fampahalalana momba ny tranonkala fifaneraserana. Afaka mamoaka data manan-danja sy azo vakiana izy io, nefa tsy mampandefitra ny kalitao. Noho izany, ny vava HTML dia ny safidiny taloha amin'ny fikambanana sy orinasa manerana izao tontolo izao.
5. Ny fifanarahana amin'ny URLs
Indraindray izahay dia mahita URL diso ary maniry ny hamoaka ny mombamomba azy ireo. Amin'ny alàlan'ny HTML, dia mora ho an'ny olona rehetra ny mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala tapaka, tranokala an-tserasera, ary ny sombintsombin'ny XHMTL. Manana fanitarana samihafa toy ny Loofah sy Sanitize izy io ary manampy amin'ny fanadiovana ny rohy tsy tapaka avy hatrany. Io hakiviana io dia afaka misintona ny angon-drakitra avy amin'ny tahiry HTML sy XML ary manome angona marina amin'ny fotoana fohy.